Tani waxay ahayd waxbarashadii carruurta Athenia | Safarka Absolut
Daniel | | La cusboonaysiiyay 22/09/2020 10:16 | Greece
Mar kasta oo aan jaleecno Giriigga Caadiga ah waxaan lama huraan ka helaynaa isbarbardhigga iyo diidmada udhaxeysa Athens iyo Sparta. Tani sidoo kale waa kiiska xagga waxbarashada: Waxbarashada Athenia oo ay kasoo horjeeddo la waxbarashada spartan.
Farqi weyn ayaa u dhexeeyay labada magaalo-magaalo. The Sparta waxbarashadii dhalinyarada, oo loo yaqaan Agoge, orday masuul ka ah gobolka. Ujeeddada kaliya ee tan laga lahaa waxay ahayd in carruurta loo tababaro sidii ay mustaqbalka u noqon lahaayeen askar. Athens, si kastaba ha noqotee, waxbarashadu waxay ahayd mid gaar loo leeyahay wuxuuna lahaa aragti caalami ah, inkasta oo ay jiri karaan kala duwanaansho sida uu qabo macalin kasta. Fikradda guud ee sikastaba ha noqotee waxay ahayd in caruurtu ay kobciyaan jirkooda iyo caqligooda labadaba. Faqradaha soo socda ayaan ku sharxi doonnaa sababta qaabkan.
Marka hore waa in la ogaadaa taas kaliya carruurta ayaa fursad u heshay waxbarashadan. Gabdhaha waxaa dib loogu celiyey guriga, halkaas oo ay wax ku barteen haweenka ku jira gynoecium. Ujeeddadu waxay ahayd in dhallinyaradan reer Ateenay ay noqdaan hooyooyinka wanaagsan iyo hooyooyinka guryaha ku nool nolosha qaan-gaarka. Marka laga reebo khilaafaadka yar, tani waxay caan ku ahayd dhammaan magaalooyinka Griiga.
1.1 Heerarka waxbarashada Athenia
2 Sophists iyo waxbarashada Athenia
Nidaamka waxbarasho ee Athens classical waxaa loo yaqaanay Paideia. Guud ahaan, hadafka waxbarashadan ayaa ahayd in loo suurtogeliyo carruurta labka ah inay gaaraan heer sare oo akhlaaqeed. Heer waxqabad leh, hadafku wuxuu ahaa in bulshada la siiyo rag aad u diyaarsan si ay uqaadaan culeyska siyaasadeed iyo militari ee ay la kulmi doonaan muwaadin ahaan qaangaarnimada.
Socrates wuxuu wax ku baray dhalinyaro badan oo ka mid ah astaamihii Athenia ilaa xukun dil ah lagu xukumay isagoo lagu eedeeyay musuqmaasuq dhalinyarada.
Ruuxa Paideia wuxuu ku salaysnaa afar tiir o kalakogathia:
Quruxda jirka iyada oo loo marayo daryeel shaqsiyeed iyo jimicsi.
Karaamada akhlaaqda, si loo kala saaro wanaaga iyo xumaanta.
Xikmad, lagu kasbaday aqoon.
Geesinimo, waa tayo lama huraan u ah in seddexdii hore si fiican loo isticmaalo.
Ilaa da'da toddobada sano, wiilasha iyo gabdhuhu waxay wadaageen waxbaris aasaasi ah, taxane ah qiyam iyo qaabab dhaqameed ay kuwa dhallaanka ah iyo addoommadii masuulka ka ahayd daryeelkooda ugu gudbiyeen kuwa yar yar iyaga oo u maraya dhaqan afka ah: quraafaad, gabayo, Homeric, sheekooyin geesiyaal IWM. Qoysaska hodanka ah waxay lahaayeen addoon dhaqameed la yiraahdo barbaarin, oo horay u maamuli jiray howlahaas.
Heerarka waxbarashada Athenia
La kala soocid waxaa la soo saaray markii uu jiray da'da toddobada sano. Kadib wiilashu waxay bilaabeen safarkoodii qaab dhismeedka ee dugsiga dadweynaha ama didascaleo. Halkaas, naxwayaasha Waxay bartay inay wax akhriyaan oo wax qoraan, marka lagu daro u soo bandhigida isaga fikradaha aasaasiga ah ee xisaabta. Ardaydu waxay ku fadhiisteen kuraasta waxayna isticmaaleen looxyo iyo papyri si ay u qabtaan shaqadooda guriga. Ciqaabta jireed waxay ahayd mid caan ah oo si wanaagsan loo tixgeliyo Tababbarka muusigga, oo ku jira dhammaan heerarka, wuxuu ka mid ahaa maaddooyinka aasaasiga ah. Macallinka arrintan u xilsaaran ayaa loo yaqaanay kitharites.
Laga soo bilaabo da'da 12 carruurta waxay bilaabeen inay ciyaaraan isboorti: legdinta, boodka, tartanka, tuurista, dabaasha ... Carruurtu waxay ku qaateen saacado badan Jirdhiska, laakiin sidoo kale waxay jimicsi badan ku sameeyeen hawo furan, had iyo jeer gebi ahaanba qaawan oo ay kormeerayaan ka lacag bixinno. Muhiimadda isboortigu waxay ahayd in markii muddo la joogo iskuullada falsafadda loo yaqaanno jimicsiyada.
Markii ay gaadheen da'da 18, dhalinyaradu waxay noqdeen ephebos. Ku ephebia waxay qaadatay laba sano waxayna ahayd marxaladii ugu muhiimsaneyd ee sameysashada dhalinyarada Athenia. Muddadan, waxaa loo tababaray farshaxanka dagaalka (tababarka ciidanka) waxaana la baray inay noqdaan muwaadiniin mas'uul ah, aftahanno wanaagsan, iyo maamuleyaal dowladeed oo wax ku ool ah.
Aristotle (macalin) iyo Alexander (arday) oo xardhan qarnigii XNUMXaad.
Dhallinyarada ka soo jeeda qoysaska ugu taajirsan ayaa waxbarashadoodii ku sii dheereeyay da 'da 21 jir iyaga oo gacanta ugu jiray falsafadyahanno iyo macallimiin caan ah. Kiis caan ah waa kan dhalinyarada Alexander kii weynaa, oo waxbarashadiisa Athens ay fulisay kuwa aad u Aristotle.
Arrin muran badan dhalisay oo ku saabsaneyd waxbarashada Athenia (iyo guud ahaan waxbarashada Griiga) waxay u janjeertay inay horumariyaan cilaaqaadka dhow ee ka dhexeeya macallin weyn iyo arday qaangaar ah. Mararka qaarkood cilaaqaadyadani waxay qaateen weji galmo oo cad, oo bulsho ahaan la aqbalay.
Sophists iyo waxbarashada Athenia
Marka lagu daro isboortiga, farshaxanka milatariga iyo muusikada, waxbarashada carruurta Athenia iyo dhalinyarada waxaa jiray maaddooyin ama maadooyin gaar ah oo muhiimad gaar ah u lahaa sameynta muwaadiniinta mustaqbalka ee poliska. Maadooyinkaas waxaa baray Sophists ardayda dooratay tacliinta sare kadib marxaladii ephebia.
Yey ahaayeen Sophists? Asal ahaan macalimiinta guud ee tacliinta sare. Waxbaristiisa waxay ku jiheysneyd yool gaar ah: sameynta aqoonyahanno iyo aftahanno ku hadla. Sifooyinkaan ayaa lagama maarmaan u ahaa guusha nolosha siyaasadeed, halkaas oo go'aanno badan ay ku xirnaayeen awoodda af-hayeennada si ay uga dhaadhiciyaan muwaaddiniinta hal fikrad ama mid kale.
Hadafkan waxaa lagu gaarey iyadoo ardayda lagu tababaro maadooyinka soo socda:
Lahjadaha, sidoo kale loo yaqaan "farshaxanka dooda." Macallimiintu waxay tababarteen ardaydooda iyagoo baray inay sameeyaan laba khudbadood oo hal fikrad iyo wixii ka soo horjeedaba la difaacay.
Xisaab, mawduuc ay ku jiraan waxyaabo kale oo xisaab, joomatari, wada noolaansho iyo cilmiga xiddigiska.
Hal-ku-dheg, "Fanka hadalka." Lees waxaa lagu baray awooda ay ku qancin karto dhagaystayaasha iyagoo adeegsanaya erayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Waxbarashada carruurta Athenia
Tani wax badan ayey aniga ila tahay !!!
WAAD KU MAHADSAN TAHAY !! ♥♥♥
Tani way fiicantahay !! .. Aad baad u mahadsantahay !!! 😀
Ku jawaab Maria paula
kan midda dabada ah waxay ku habboonyihiin giles hahahahaha
10-ka xarumood ee wax laga iibsado ee Mareykanka